KOLIKOLY TENY AMIN’NY LALAM-PIRENENA RN4 : Niakatra Fitsarana ireo zandary telo voarohirohy
Zandary telo no nakarina Fitsarana ny zoma teo noho ny kolikoly. Araka ny nambaran’ny kaomandin’ny fari-piadidian’ny zandarimaria eto Mahajanga Andrianoasy « D’y La paix » dia ny sabotsy teo, tamin’ny valo ora alina no nanao sakana teo Ambalan-janakomby amin’iny lalam-pirenena fahaefatra iny ireto zandary ireto. 17 juin 2019
Ny praiminisitra mihitsy no nahazoan’ny tompon’ andraikitra eto Mahajanga tatitra fa nanao kolikoly izy ireo, ka nandray fepetra avy hatrany ny fibaikoana azy ireo nanao fanadihadiana. Efa miezaka mamehy sy mandrindra ny fifamoivoizana ny fitondram-panjakana ka nisy ny fanatsarana ny lalàna sy fandrindrana izany. Anatiny ny fanavaozana ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana, fametrahana toeram-pialan-tsasatra. Tsy mandefitra amin’izay rehetra mitsivalam-pandry na iza izy na iza noho izany ireo tompon’ andraikitra isan-tokony, indrindra ireo natao hampihatra ny lalàna, izay tokony ho modely.
Vao tsy ela no nanambara ny kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa fa tsy azo ekena ny fanaovan’ny zandary kolikoly sy fanamparam-pahefana amin’ny asany. Anisan’ny imasoan’izy ireo ny ady amin’ny kolikoly eny an-dalana amin’izao fotoana izao. Nanambara hatrany moa izy fa efa maromaro ny tratra ary tsy misy mifampiaro na dia samy anivon’ny Zandarimariam-pirenana aza fa saziana avy hatrany izay tratra. Rehefa manao ny tsy mety dia entina eny anivon’ny Fitsarana avy hatrany ka ny Mpitsara no mampihatra ny lalàna.
Misy ny fanolorana mari-pankasitrahana izay miasa tsara
Mivoatra tsara ny fomba fiasan’ny Zandarimariam-pirenena ary arahi-maso akaiky ireo zandary am-perinasa mba ho tena mpiasa madio sy modely eny amin’ny fiarahamonina. Ireo izay tratra mandika lalàna tonga dia iharan’ny sazy avy hatrany. Tsara homarihina ihany koa anefa fa misy ny fanolorana ny mari-pankasitrahana ho an’ireo Zandary izay manana fomba fiasa tsara raha ny tatitra avy eo anivon’ny zandary hatrany. Efa misy ny laharana finday ahafahan’ny vahoaka mitaraina raha sendra izany tranga izany dia ny 0341401388.
Nangonin’i Tatianà R. sy Vanessa